Highlights China Meditech e-2018 Umkhiqizi kanye Umthengisi | Meditech
Kungani kufanele ukhethe Meditech
Zonke-in-one Medical Oxygen Systems
Yabadobi Oxygen generator
Central Ukuqapha Control System
Ikhaya Oxygen Concentrators
Highlights Meditech e-2018
Kanjani isikhathi siyandiza! 2018 isivele wakhomba goodbye kithi. Ngokungangabazeki, 2018 kuyinto unyaka obaluleke kakhulu emlandweni ukuthuthukiswa Meditech.
Bheka emuva, sikholwa ukuthi zonke izinyathelo phambili uzobe libhalwe ngokuthi okuphakade Ukudidiyela yomlando ukuthuthukiswa Meditech sika.
emisha Technical isihloko ephikelelayo Meditech.In 2018, Meditech injected ubungqabavu entsha ku imikhiqizo yayo eyomuntu osezingeni-onqenqemeni ubuchwepheshe.
Meditech kudala esikude eyodwa elawula uhlelo lokuqala emhlabeni, esikude eyodwa uhlelo lokulawula eqaphela amaningi amasethi, nenani nezilawuli wesistimu-mpilo isizukulwane, okungase esitshalweni e ayaphenduka lisetshenziswe ngendlela enokulinganisela. Lwenza iphethini entsha elawulwa kude uhlelo umoya-mpilo isizukulwane futhi inikeza kungenzeka okokuqala futhi inkonzo lokuqala.
MD2018 uhlelo innovative okuhlangene-mpilo isizukulwane, ukunyakaza Modular, ezimele qeda imbobo, ultra-ongaphakeme umsindo design, breaking Sakhiwo sangekhatsi bendabuko-mpilo zomkhiqizi, umsindo omkhulu, izinga lokushisa eliphakeme, engazinzile ubumsulwa ukulinganiselwa.
Uchungechunge G onobuhle ngokuhlanganyela lakhiwa Meditech nase-Atlas, okuyizinto esitebeleni kakhulu futhi kunokwethenjelwa e ikhwalithi kanye nokusebenza.
Yakha Umhlaba High-ekupheleni Brand
Ngonyaka odlule, Meditech ukwenze impumelelo enkulu e emikhulu nemibukiso ekhaya aphesheya, okubonisa ubungqabavu ezimele emisha sha emhlabeni.
Dubai embukisweni yezokwelapha
2018 CMEF Spring embukisweni
2018 CMEF Autumn embukisweni
Taiwan isilwane embukisweni
India embukisweni yezokwelapha
Australian isilwane embukisweni
Kulo nyaka, Meditech esungulwe legatsha Ausmedi Kavia India. Ezinyangeni ezimbalwa nje, inqotshwe inqwaba oda futhi ngempumelelo efakwe izibhedlela 5, okwenza kube esincintisana elibalulekile embonini-mpilo yeNdiya.
Kulo nyaka, Ausmedi iqhutshelwe phambili uhulumeni ibhizinisi ngokubambisana, futhi ngokusemthethweni baba umphakeli ekhethekile Vetcentric, isilwane umbimbi ngobukhulu Australian, futhi kwase efakwe Ringwood Vet eziphuthumayo, uhlelo ngobukhulu futhi eyinkimbinkimbi kunazo isilwane yezokwelapha-mpilo isizukulwane Australia.
Meditech isungule nobambiswano lobuchwepheshe futhi amasu nge Systems Ozone Water-United States ukuba uqaphele izinzuzo ayahambelana izinsiza zombili 'futhi ngokuhlanganyela kwenyuswe ukuthuthukiswa okukhulu zokukhiqiza i-oksijini global futhi Ozone isicelo.
Meditech nase-Atlas baye babe ozakwethu franchised ukuze ngokuhlanganyela ukuthuthukisa futhi ukuklama entsha onobuhle ukukhiqizwa oxygen ne ukunikeza ehola izixazululo ukukhiqizwa-mpilo emhlabeni.
Meditech uye eyenziwa umkhakha inyuvesi-ucwaningo nokubambisana namanyuvesi abaningi abadumile kanye nezinye izikhungo. Ngokuwasebenzisa ngokugcwele esikoleni-ibhizinisi amathuba nokubambisana, inkampani ngokuqhubekayo ngcono emisha ikhono layo ezimele futhi inikeza ezinhle technical support kanye sesevisi umkhakha.
Kusukela ekuqaleni sokukhubeka, ukuze ukukhula kancane kancane, ngokungazi, Meditech Useke wadlula iminyaka engu-15. Siyabonga eniwuphathisiwe, kusekelwa, ukuthembela nesikhuthazo endleleni kuwe!
isikhathi Iposi: Apr-17-2019
Psa Oxygen Generation System , Esibanzi Scale Oxygen Generator , Animal Oxygen Concentrator,
Ikheli: CHA. 62-63, Xinmao, Qilu Isayensi Nobuchwepheshe City, 299 Zidong Avenue, Jinan okusha Izinto Industrial Park, Tianqiao District, Jinan, Isifundazwe Shandong, China
Meditech Ufunde Veterinary Association ...
Meditech ezikhazimula at Arab Impilo 2019